Mpomba ireo kandidà : Mifandramatra andalam-be -
AccueilSongandinaMpomba ireo kandidà : Mifandramatra andalam-be
Roa andro monja niatombohan’ny fampielezan-kevitra, lasa hita maso ny fifampihantsiana ataon’ireo mpomba ny kandidà ao amin’ny tambajotra sosialy. Iray volana maninjitra mantsy izay, dia nifandramatra ary tsy mipetraka intsony ny fifanajana amin’ny fifampiresahana anatin’ny tambajotra sosialy, ataon’ireo mpomba ny kandidà. Ompa variraraka, teny ratsy, fanambaniana, izay no hita fa nisongadina tamin’ny fifampihantsiana. Izany hoe tsy nipetraka intsony ny fanajana ny safidiny avy, fa rehefa tsy mitovy hevitra dia herisetra am-bava avy hatrany no mandeha. Tsy nijanona tao anatin’ ny tambajotra sosialy anefa ny fifandranitana, fa taorian’ ny fanombohana amin’ ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra, dia eny andalam-be no mifampihantsy. Porofon’izany ny zava-nisy teo amin’ireo mpomba ny kandidà laharana faha-25 sy ny faha-13, izay azo lazaina fa fomba tsy mendrika ihany no nasehon’ireto farany. Tsy vitan’izay fa nisy ihany koa ireo mpomba ny kandidà, izay mbola nifandramatra teny Tanjombato, omaly ihany.
Porofon’ny tsy fandraisana andraikitra hatrany am-boalohany ny zava- misy tahaka izao, satria tsy nipetraka mazava ny lalàna. Ny antony dia tokony nisy ny toromarika nomen’ireo kandidà ny mpanatanteraka ny fampielezan-keviny, raha efa nipetraka hatrany am-boalohany ny lalàna. Mazava ho azy, fa ny mpampiely ny hevitr’ireo kandidà, dia ny olona miasa ao aminy sy resy lahatra ary tokony hofeheziny. Ny atahorana dia mbola misy 29 andro ny fampielezan-kevitra, ka raha ny fanombohany no mafampana tahaka izao. Hahiana hafana tanteraka kosa ny any amin’ ny faha-15 ny andron’ny fampielezan-kevitra, ka ahiana ny mety hisian’ny ady amin’ ireo mpomba ny kandidà. Raha toa mikorontana kosa ny fandehan’ny fampielezan-kevitra eto Madagasikara, dia mbola any New-York ireo mpikarakara fifidianana. Midika anefa ny zava-misy ankehitriny, fa tokony hisy ny fandraisana fanapahan-kevitra amin’ny fametrahana ny fandriam-pahalemana, mandritra ny vanim-potoanan’ny fampielezan-kevitra